Aza matahotra … Mahatoky Andriamanitra ka reseo ny tahotra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ALAHADY TSOTRA 12 A
Jer. 20, 10-13 ; Sal 68 (69) ; Rom. 5, 12-15 ; Mt. 10, 26-33
« Aza matahotra … Mahatoky Andriamanitra ka reseo ny tahotra »
Taorian’ny nifidianan’i Jesoa ireo Apostoly roa ambin’ny folo lahy dia nampianatra sy nanafatrafatra azy ireo Izy ny amin’ny fomba hiatrehan’izy ireo ny asa fitoriana ny Evanjely. Tsy ho mora ny asa. Ho maro ny sakantsakana sy ny fanoherana. Izany indrindra no ankaherezan’i Jesoa azy ireo hanana fitokisana manoloana ny fahasahiranana sy ny fanenjehana ka amerimberenany ny hoe Aza matahotra… : Aza matahotra ny olona ianareo, aza matahotra izay mamono ny vatana, aza matahotra fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo…
« Aza matahotra ny olona ianareo, fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin’ny maizina dia ambarao eo amin’ny mazava… ». Tahaka ireo mpaminany taloha, izay nandray hafatra avy amin’Andriamanitra Ray, ka nirahina hampita izany amin’ny olona, dia nandray hafatra avy amin’i Jesoa ihany koa ireo Apostoly ary nirahiny hampita izany amin’ny olona. Nambara tamin’izy ireo manokana – tao amin’ny maizina – izany hafatra izany fa anjaran’izy ireo kosa ny mampiely izany ampahibemaso – eo amin’ny mazava –. Nampianarina azy ireo manokana izany – nobitsihina teo amin’ny sofina – fa anjaran’izy ireo kosa ny mitory an’izany – eny ambony tafon-trano –. Antso miampita ny an’i Jesoa ary iraka hifampitohizana ka ankahereziny izy ireo mba tsy hatahotra.
« Aza matahotra izay mamono ny vatana, fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin’ny afobe ». Hiatrika fanoherana sy fanenjehana tahaka ireo mpaminany taloha ihany koa ireo apostoly irahina. Jeremia mpaminany (vakiteny voalohany androany) dia niaritra fanenjehana sy fanoheran’ny olona, indrindra ireo mpitondra. Efa reko, hoy Jeremia, ny vava ratsin’ny olona betsaka. Nenjehin’ny olona i Jeremia, nampangaina tsy marina, nesoina sy tonga fanaraby… Zary lasa anaram-petaka sy anaram-bositra ho azy ny eo « Magôr Missabîb - izany hoe - Fangorohoroana àvy hatraiza hatraiza ». Tsy nahakivy an’i Jeremia anefa izany satria natoky ny Tompo izy. « Ny Tompo anefa momba ahy, toy ny lehilahy mahery ; ka hitambotsitra ireo mpanenjika ahy ». Izany fitokisan’i Jeremia izany no fampianarana ho an’ny mpitory rehetra, ireo rehetra mijoro ho mpaminany ankehitriny, manoloana ny fanoherana sy ny fanenjehana. Mety hamono ny vatana ireny fa tsy mahay mamono ny fanahy ka tsy tokony hatahorana…
« Aza matahotra fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo ». Sary an’ohatra momba ny sandam-bidin’ny fody roa no entin’i Jesoa hanamafy ny tokony hitokisan’ireo iraka amin’ny fitahian’Andriamanitra Ray. Kely sy bitika, varifitoventy, tsy ampy ariary iray akory ny vidin’ny fody roa tamin’izany. Na ny fahafatesan’ireny voromanidina madinika ireny aza anefa, hoy Jesoa, fantatry ny Ray, mainka va fa ireo iraka nofinidiny tao anatin’ny vahoaka maro be. Miahy sy mikolokolo ny voromanidina sy ny zava-maniry Andriamanitra Ray. Mbola mihoatra noho ny fiahiany an’ireny anefa ny fitahiany ny olombelona indrindra ireo nofinidiny sy nirahiny.
Betsaka ny tahotra sy ny ahiahy ankehitriny, indrindra manoloana izao valan’aretina izao. Maro ihany koa anefa ireo tsy matahotra fa sahy manao vy very ny ainy ho fanavotana ny maro : ireo mpitsabo sy ireo mpanampy ny mpitsabo miatrika mivantana ny aretina sy ny marary, ireo mpitandro ny filaminana isan-tokony miaritra ny hatsiaka sy ny ranonerika mamirifiry eny amoron-dalana eny, ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tsy mandry andro tsy mandry alina mitady izay fomba sy tetika hoenti-miady amin’ity areti-mandoza ity. Manako ao am-pon’izy ireny ny tenin’i Jesoa hoe : « Aza matahotra…».
Tsy vitsy ihany koa anefa ireo resin’ny tahotra ka vaky lositra tsy sahy miatrika ady. Misitri-belona sy mihiboka mafy ary sahy mandao ny andraikitra nankinina aminy mihitsy aza satria hono hoe « mamy ny miaina » ary « aleo maty rahampitso toy izay maty anio ». Hoy ihany koa anefa ny fiteny hoe « aleo tsy mataho-maty toy izay matin’ny tahotra » ary indray andro ihany no maty rahatrizay fa isan’andro kosa no velona hatramin’izao... Manako ao am-pon’izay rehetra matahotra amin’izao ady izao ihany koa ny tenin’i Jesoa hoe : « Aza matahotra izay mamono ny vatana… ». Eny, mahatoky Andriamanitra ka reseo ny tahotra.
« Ry Tompon’ny Tafika, Ianao izay mizaha toetra ny marina, izay mahita ny voa sy ny fo, hahita ny famalianao an’ireo aho, fa Ianao no nanankinako ny adiko » (Jer. 20, 12).